La Yaabka Dunida:Ilmo aan dhalan oo uurka hooyadiis ku jira oo la xadey – SBC
La Yaabka Dunida:Ilmo aan dhalan oo uurka hooyadiis ku jira oo la xadey
Tuuganimadii ugu yaabka badneyd uguna halista badneyd oo sababtey geeri iyo qatar kale oo dhanka nolasha ah ayaa dhawaan laga soo tabiyey wadanka Koonfur Afrika ka dib makrii haweenay u dhalatey dalkaasi ay ku dhaqaaqday xatooyadii ugu weynd oo ay ku xadey ilmo aan dhalan oo uur ku jiray,.
Haweenayda falkan sameysay ayaa lagu magacaabaa Loretta Cooke waana 29 sano jir degan degmada Randfontein ee Galbeedka magaalada Johannesburg, iyadoo haweenay uur bilo dhameystey leh isku dayday inay ka xado ilmo aan dhalan.
Loretta ayaa haweenaydii uurka laheyd waxay mindi ka galisay caloosha iyadoo jeexdey in door ah ka dibna waxay caloosha kala soo baxdey ilmihii aan dhalan, iyadoo dhaawacidii mindida ay u geeriyootey haweenadyii.
Haweenaydan ma naxdada ah ayaa ilmihii oo dhaawac madaxa ka soo gaarey caloosha kala baxdey ayaa deg deg u tagtey goob caafimaad si ay ugu hesho gargaar dhanka caafimaadka dhaawaca ilmaha, hase yeeshee tuhun ku dhashay shaqaalaha caafimaadka ayaa sababay in haweenaydaasi warkeeda Booliiska loo gudbiyo, waxaase nasiib laheyd in warka ilmaha caloosha hooyadiis lagala baxay ay Booliisku daqiiqado ka hor heleen taasi oo keentey in gacanta lagu dhigo haweenaydii falkaasi foosha xun geysatey.
Loretta Cooke oo la soo taagay maxkamada Randfontein Magistrate Court waxaa dacwad ku oogayaashu dalbadeen in loo sii hayo ilaa iyo inta baaritaan buuxa ay soo kordhinayaan, iyadoo haweenaydaasi lagu hayn doono xabsiga ilaa iyo 7-da bisha February ee soo socota.
Booliiska waxaa loo soo sheegay in haweenay lagu magacaabo Valencia Behrens oo 34 sano jir ah ay ku sugan tahay gurigeeda iyadoo ku dhex jirta daad dhiig ah, isla markaana ay xaaladeeda ka warheleen dadka dariska ah, iyadoo markii ay Booliisku yimaadeen gurigii dhacdadu ka dhacdey ay ka heleen meydka haweenayadii ilmaha caloosheeda lagala baxay.
Appel Ernest oo ah afhayeenka Booliiska deegaankaasi ayaa sheegay in dhacdadan oo mid mucjsio ah oo ku cusub ay baaritaan ku hayaan, isla markaana qabashada haweenayda dilka geystey ay gacan ku siiyeen shaqaalaha rugta caafimaadka.
“Caloosha haweenayda uurka laheyd oo 34 jir ah ayaa la dooxay oo lakala dilaaciyey, ka dibna waxaa lala baxay ilmihii uurka ku jiray, qofka laga shakisan yahay waa la qabtey,
Dadka yaqaan Ms Cooke oo lagu eedeynayo in falkan ku dhaqaaqday ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeysay ay iska dhigaysay qof uur leh.
Joseph Pieterse oo ah aabaha uurka lagu xadey ayaa u sheegay dadka wararka faafiya in ay ku tahay qaracan iyo niyad jab iyo lamaantiisii uu waayo, waxaase uu sheegay in ilmaha la isku dayey in la xado oo ahaa kiisii shanaad oo gabar ah ay haatan wanaagsan tahay oo ay ku jirto Isbitaalka.
Waayaab waligey mamaqlin uwad andhalan olagagalasobaxay urka hoyadi
c/kariin max'ed xaraash says:
waa layaaB waligey ma arkin arin noocaan okala ah